लोग्नेको गर्लफ्रेण्ड ! « Sansar News
२९ आश्विन २०७८, शुक्रबार ०६:११
राधाले आज सपिङ्ग मलमा प्रत्यक्ष देखी, संजय एउटा केटीसँग त्यहीँभित्रको क्याफेमा मुखामुख हुँदै कफी पिउँदै गरेको । एकदुई जनाले “भाउजू ! दाईको आजकल अफिसकै एउटीसँग लसपस छ है !” नभनेका होइनन् । यस्तो कुराले मनमा केही चिसो पसेपनि “ह्या ! होइन होला है ! कोही राम्रो साथी पनि त हुनसक्छ नि !” भनेर हाँसेरै टारीदिएकी थिइ । तर आज भने खुद आफ्नै आँखाले देखी – दुबैजना एकआपसमा झुक्दै आँखा जुधाउदै र ओँठमा मुस्कानको स्वाद लिएर कफी पिउँदै गरेको । त्यही माथि टेबलमा क्यास्ट्रो ब्राण्डको सामानसहितको झोला देख्नेबित्तिकै त शान्त स्वाभावकी राधालाई पनि रिसको ज्वाला छुट्यो –“गिफ्ट किनिदिएको होला नि नकचरीलाई …” बिजुली चम्केसरीको यो बिचारले कतै भित्रैसम्म हल्लायो । त्यहीं गएर झोलालाई च्यातचुत बनाउदै त्यो केटिको जगल्टा उखेल्न मन बन्यो । खाईरहेको तातोकफी लोग्नेको टाउकोबाट खन्याईदिन मनलाग्यो ।
“हुन्छ बस्नुस !”, ड्राइभरले पछाडीको लक खोलिदिदै भन्यो, “५०० रुपैयाँ लाग्छ ।”
अरुबेला भा’भए तीन सय भनेर बार्गेनिङ्ग गर्ने राधालाई आज केही भन्न मन लागेन, चुपचाप बसी । मनभित्र तर्कनाको आँधीबेरि चल्दैछ भन्ने त अत्यधिक रातो अनुहारले बोल्दै थियो । तर्कनाको हुँडरीमा हेलिँदै गर्दा कतिखेर ट्याक्सीले घट्टेकुलो पुर्‍यायो थाहै पाईन । भाडा तिरेर यन्त्रवत कोठाको बेडमा साडी पनि नखोली डंग्रङ पल्टिई । सिनेमाको दृश्य झै सन्जयसँग चिसिदै गएका दिनहरु उनको मानशपटलमा फनफनी घुम्न थाल्यो ।
ब्रेकफास्ट तयार भाछैन अझै ? कति बजे पुग्नु अफिस ? हाउ स्लो यु आर ! सरिता माईजुसँग सिक, कसरी फटाफट मामालाई तयार हुन मद्दत पु¥याउनुहुन्छ भनेर । आई बिकेम लेट अलवेज !”
एक/दुई जनाले “भाउजू ! दाईको आजकल अफिसकै एउटीसँग लसपस छ है !” नभनेका होइनन् । यस्तो कुराले मनमा केही चिसो पसेपनि “ह्या ! होइन होला है ! कोही राम्रो साथी पनि त हुनसक्छ नि !” भनेर हाँसेरै टारीदिएकी थिइ । तर आज भने खुद आफ्नै आँखाले देखी – दुवै जना एकआपसमा झुक्दै आँखा जुधाउदै र ओँठमा मुस्कानको स्वाद लिएर कफी पिउँदै गरेको ।
मन बेस्सरी बेचैन भयो । छाती गरुङ्गो भएजस्तो, सासफेर्न गाह्रो भएजस्तो भयो । छटपटी बढेर बेडको छेउमा टुक्रुक्क बसिरहन सकिन अनि उठेर कोठाभित्रै टहलिन थाली । अचानक, भित्तामा झुन्डीएको ठुलो काठको फ्रेम भएको ऐनामा राधाको नजर प¥यो । छरपस्ट भएको कपाल, आँशुले लत्पताएको गाजल, बिना मेकअपको फुङ्ग उडेको सपाट चेहरा ! आँफ्नै रुपरंग देखेर खीन्न बनायो ।
“राधा ! यो डंगीलाई पानी त राख्दीनु । हेर, बिचरोको कपमा एकथोपा पानी छैन ।”– झमक्क साँझमा आईपुगेको संजय गार्डेनबाटै करायो –“दिनभरी केही काम छैन तैपनि यत्ती एउटा ककुरको स्याहार गरेको पाउँदिन । थाह छ ? कति हालेर किनेको यो जर्मन शेफर्ड ? पूरा २२ हजार ! हेर्नसक्दिन भनेको भए ल्याउनेनै थिईनँ ।”
अनि उनीहरु बिधिवत रुपमा अलग भए । छोराहरु आमासँगै बस्ने अदालती फैसला रह्यो । यता संजय स्वतन्त्र भएको मात्र के थियो, गर्लफ्रेण्डले लात हानी । एउटा धनी एन.आर.एन.सँग अमेरिका भास्सिई । स्वास्नी र गर्लफ्रेण्ड दुवै गुमेपछि भने उस्को दिनचर्या अस्तव्यस्त हुनथाल्यो । न खानको ठेगान न घर आउनको ठेगान । ईष्टमित्र साथीभाईहरु यसै–यसै तर्किएर किनारा लाग्न थाले । अरुको त कुरै भएन, समयमा खान नपाएपछी उस्को त्यै बफादार जर्मन शेफर्ड कुकुर पनि नफर्किने गरी कतै गायब भयो । घर भुतबङ्गला जस्तो भयो अनि आँफु जोगीजस्तो ।
दुईवर्ष पछि …….
एकदिन अकस्मात राधासँग भूगोल पार्कमा संजयको आमुन्ने सामुन्ने भयो । एकछिन त दुबैजना हेराहेर मात्र गरे । बोली फुट्न हम्मे प¥यो । के बोल्ने नबोल्नेको दोधारमा संजयकै बोली फुट्यो – “सन्चै छ्यौ राधा ?”
झुस्स बढेको दाह्री, खुज्मुजिएको सर्ट, मुर्झाएको अनुहार देखेर राधालाई नमिठो लाग्यो । बिचरा ! त्यस्तो आगा ेजस्तो भर्भराउँदो मान्छे यस्तो भएर हिँड्दैछ भनेर कता–कता माया पनि लाग्यो । छातीको देब्रे कुना चस्किएको जस्तो भयो । मलीन स्वरमा भनी – “अँ, सन्चैछु । के स्वरुप लिएर हिँड्नु भएको यस्तो ? बिहे गर्नुभएको छैन अझै ?”
संजयलाई त्यहीँ डाँको छोडेर रुँदै राधाको पाउ समाएर माफी माग्न मन भयो । तर पारपाचुके लिईसकेको स्वास्नीसँग कुन मुखले माफी माग्नु ? गरूङ्गो मन बनाउँदै चौरबाट उठ्यो अनि बिस्तारै भन्यो, “ल राधा, आफ्नो र छोराहरुको ख्याल राख है । उनीहरुलाई तिमीजस्तै ज्ञानी र असल मान्छे बनाउनु ।” चारपाईला पर पुगीसकेको संजयले रुँदै भन्दै गरेकी राधाको आवाज सुन्यो –“म एक्लैले सक्दिन संजय । छोराहरुलाई तिमी चाहिन्छ । म के गरुँ ?”